Al-Shabaab oo laga saarey degmada Kuntunwaarey | KEYDMEDIA ONLINE
11 April 2021 Golaha Shacabka oo birri ka doodaya doorashooyinka dalka
Al-Shabaab oo laga saarey degmada Kuntunwaarey
Howlgalka ayaa wali socda, iyadoo malleeshiyaadka Al-Shabaab ay u carareen dhinac degmada Sablaale oo katirsan isla gobolka Shabeellaha Hoose ee Koonfurta Soomaaliya.
KUNTUWAREY, Soomaaliya - Ciidamada DANAB iyo kuwa AMISOM ayaa saakay fuliyay howlgal wadajir ah, oo ay kula wareegeen gacanta ku heynta degmada Kuntuwaarey, ee gobolka Shabeellaha Hoose, halkaasoo mudo sanado ah Kooxda Al-Shabaab ka talinaysay.
Qaar kamida dadka degaanka, oo la hadlay Keydmedia Online ayaa sheegay in malleeshiyaadkii Al-Shabaab ee laga saarey degmada ay u baxsadeen dhanka Sablaale, iyadoo Ciidanka huwanta ah ay wali howlgallo kasii wadaan degaanada banaanka ka ah Kuntuwaarey.
Kooxda Al-Shabaab ayaa u ahayd degmada xarun Maxkamad shacabka u doontaan iyo saldhig ay ku tababarto dagaalyahanadda, waxaana la wareegisteeda ku noqonaysaa dharbaax ku dhacday awoodeedii gobolka xudunta u ah duqeymaha Mareykanka.
Dhowr jeer ayay Ciidanka dowladda qabsadeen magaaladda, haddana dib uga soo baxay iyagoo u ogolaaday Al-Shabaab inay dib ula wareegto, waxaana la ogeyn inay sii joogi doonaan iyo inay dib u gurasho sameyn doonaan.
Waxay ku taalla Kutuwaarey wadada isku xirta Muqdisho iyo Baraawe, oo AMISOM dhibaato ku qabtay inay sahayda u marsiiso Ciidanka ku sugan gobolka, kadib markii dhowr jeer lagu weeraray kolonyada gaadiidkeeda.
0 Comments Topics: alshabaab gobolka shabeellaha hoose
Qarax miino oo ka dhacay Shabeellaha Hoose
Warar 23 November 2020 19:31